सेन्ट लुइस पुलिस: को, कहाँ र कहिले फोन गर्ने • DutchtownSTL.org • डचटाउन, सेन्ट लुइस, MO
डचटाउनमा पुलिस: को, कहाँ र कहिले फोन गर्ने
यदि तपाईं आफ्नो छिमेकीमा शंकास्पद, शंकास्पद वा आपराधिक व्यवहारको सामना गर्नुहुन्छ भने तपाईं कसलाई बोलाउनुहुन्छ? धेरै जसो केसहरूमा तपाईले पुलिसलाई बोलाउनु हुन्छ। तल, हामी सम्पर्क गर्नका लागि विधिहरू छलफल गर्नेछौं सेन्ट लुइस महानगर पुलिस विभाग, र निश्चित परिस्थितिहरूमा उपलब्ध विकल्पहरू पनि अन्वेषण गर्दछ।
जब तपाइँ पुलिसलाई कल गर्नुहुन्छ, चाहे यो 911 १११ वा आपतकालीन लाइनको माध्यमबाट होस्, सकेसम्म धेरै जानकारी उपलब्ध गराउने प्रयास गर्नुहोस्। नोट गर्नको लागि महत्त्वपूर्ण बुँदाहरूमा स्थान, संदिग्ध वा संदिग्ध सवारीको विवरणहरू (जब लागू हुन्छ), र कुनै अन्य विवरणहरू समावेश गर्दछ जुन अन्तर्दृष्टि प्रदान गर्दछ।
अपराधको वास्तविक ठेगाना प्रदान गर्न तपाईको सक्दो प्रयास गर्नुहोस्, वा जति सक्दो राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ - तपाईको आफ्नै ठेगाना प्रयोग नगर्नुहोस्। हाम्रो मा उल्लेख छ NIS संसाधन गाइड, सेवाको लागि बहु कलहरूले उपद्रवी सम्पत्ति स्थितिमा ठेगाना बढाउन सक्छन्, पुलिस र अन्य शहर विभागहरूले थप अनुसन्धान गर्न।
प्रेषकहरू सोध्छन् यदि तपाईं आफ्नो नाम र एक कलब्याक फोन नम्बर छोड्न चाहनुहुन्छ भने। यो आवश्यक छैन। तपाईं अज्ञात रूपमा रिपोर्टहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। जे होस्, यदि तपाईंले आफ्नो सम्पर्क जानकारी छोड्नुभयो भने, अधिकारीहरू अधिक जानकारी लिनको लागि सम्पर्कमा हुन सक्छन्।
हामी मध्ये धेरैलाई जीवन खतराको स्थितिको लागि 911 मा कल गर्न थाहा छ। यदि तपाईंलाई तत्काल पुलिस, आगो, वा चिकित्सा सेवाहरू चाहिएको छ भने 911 911 ११ मा कल गर्नुहोस्। यदि तपाईंलाई आफ्नो अवस्था आपतकालिन हो वा होइन भनेर पक्का हुनुहुन्न भने 911 XNUMX ११ मा कल गर्नुहोस्। जब श doubt्का लाग्छ,, XNUMX ११ मा कल गर्नुहोस्।
तपाईलाई सँधै 911 911 ११ मा कल गर्नुपर्नेछ आगो वा मेडिकल आपतकालिनको अवस्थामा। हिंसात्मक अपराध वा अपराधको प्रगतिमा XNUMX १११ मा कल गर्नुहोस्, र कुनै पनि संदिग्ध व्यक्ति वा सवारी साधनहरूको विवरण प्रदान गर्न सक्दो गर्नुहोस्।
यदि तपाईं संलग्न हुनुहुन्छ वा कुनै दुर्घटनामा चोटपटक लाग्ने साक्षी दिन सक्नुहुन्छ, call 911 ११ मा कल गर्नुहोस्। यदि दुर्घटनाले ट्राफिकमा अवरोध खडा गरिरहेको छ वा नजिकका मानिसहरूलाई कुनै अन्य खतरा पेश गरिरहेको छ भने तपाईंले 911 XNUMX ११ पनि कल गर्नुपर्नेछ।
पुलिस गैर आपातकालीन लाइन
एक आपातकालीन को मामला मा, तथापि, कल गर्न एक आपतकालिन फोन नम्बर छ: (314) 231-1212। गैर आपातकालीन लाइन कल गर्नुहोस् यदि तपाईंसँग एक मुद्दा छ कि तत्काल प्रतिक्रिया आवश्यक छैन।
केहि सम्पत्ति अपराधले गैर-आपतकालीन लाइनमा कल पठाउने थियो। उदाहरणको लागि, यदि कसैले तपाईंको गाडी वा रातो रातो ग्यारेजबाट सम्पत्ति चोरेको छ भने, गैर-आपतकालीन लाइनमा कल गर्नुहोस्। यदि त्यहाँ कुनै श is्कास्पद छैन र अपराध केहि समय पहिले भएको हुनसक्छ, गैर आपातकालीन नम्बरमा कल गर्नुहोस्।
धेरै जसो केसहरूमा, पुलिस वास्तवमा अपराधको दृश्यमा आउँदैनन् - तिनीहरूले जानकारी लिनेछन् र फोनमा आफ्नो रिपोर्ट बनाउँनेछन्।
यद्यपि कुनै अपराध गरिएको थियो, प्रहरीले तत्कालै गर्न सक्दिन जबसम्म शंकास्पद नजिकै छ। तिनीहरूले जानकारी स collect्कलन गर्न सक्छन् जुन समयको अवधिमा घटनाहरूको स्ट्रिंगको साथ बाँध्न मद्दत गर्दछ। उनीहरूले एक रिपोर्ट पनि तयार गर्न सक्दछन् जसले अपराध तथ्या more्कहरूलाई ट्र्याक गर्न मद्दत गर्दछ। तपाईको बीमाकर्ताले पनि रिपोर्टको एक प्रति अनुरोध गर्न सक्छ।
अर्को घटना जसमा गैर आपातकालीन लाइन कल गर्न को लागी एक चोटि बिरामी वा ट्राफिक कुनै अवरोधको साथ एक फेन्डर बेंडर वा अन्य सानो दुर्घटना को लागी हो। पुलिसले एक रिपोर्ट लिनेछ जुन तपाईं आफ्नो बीमा दावी फाइल गर्न प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
हामी दृढताका साथ सुझाव दिन्छौं कि यस प्रकारका घटनाहरूका लागि रिपोर्ट नम्बरहरू अनुरोध गर्नुहोस् र त्यसलाई कायम राख्नुहोस् किनकि तिनीहरू पछि पुलिसलाई पछ्याउने वा बिमा कम्पनीहरूसँग व्यवहार गर्न उपयोगी हुन सक्छ।
पुलिसलाई गोली हानि रिपोर्ट गर्दै
तपाई या त 911 १११ वा गैर आपतकालीन लाईन संदिग्ध बन्दको गोली हान्नको लागि रिपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईं बन्दूक सुन्नुहुन्छ भने, कम्तिमा दुई चीजहरूको नोट लिने प्रयास गर्नुहोस्: जहाँ तपाईं विश्वास गर्नुहुन्छ कि शटहरू फालिएका थिए, र तपाईंले कति शटहरू सुन्नुभयो। तपाइँले प्रदान गर्न सक्ने कुनै पनि थप जानकारी पनि सहयोगी हुनेछ।
डचटाउनस्टालको गनसटमा कल गर्नका लागि थम्बको नियम
यदि तपाईंलाई केही निश्चितताका साथ थाहा छ कि जहाँ शटहरू हटाइएको थियो, 911 call ११ मा कल गर्नुहोस्। पुलिसलाई अनुसन्धान शुरू गर्न सही सुरूवात बिन्दु प्रदान गर्नुहोस्।
यदि तपाईंसँग "शट फायर गरिएको थियो" बाहेक धेरै जानकारी छैन भने, घटनाको रिपोर्ट गर्नु अझै महत्त्वपूर्ण छ, जे होस् तपाईले गैर-आपतकालीन लाइन मार्फत यसो गर्न छनौट गर्न सक्नुहुन्छ। समान सामान्य क्षेत्रबाट बहु कलहरूले अधिक विशिष्ट स्थान इंगित गर्न मद्दत गर्दछ।
सेवाको लागि कलको आधारमा पुलिस स्रोतहरू विनियोजन गर्न सकिन्छ। त्यसोभए तपाईं विवरणहरूमा छोटो हुनुहुन्छ भने पनि, तपाईंको कल र घटना लग भएको निश्चित गर्नुहोस्। यो कल गर्न सधैं महत्त्वपूर्ण छ।
बन्दको गोलीमा कल गर्दा, शट फायर गरिएका ठाउँको सही अनुमानित गर्न सक्दो गर्नुहोस्। यदि तपाईं विश्वास गर्नुहुन्छ कि तिनीहरू अर्को ब्लक ओभर थिए, सडकको नाम र ब्लक नम्बर प्रदान गर्नुहोस्। शटहरू अगाडि अफफिल्डका लागि, तपाईंको उत्तम अनुमान लगाउनुहोस्। जब एकै समयमा धेरै नागरिकले एकै ठाउँमा गोलीबारी रिपोर्ट गर्छन्, पुलिस अनुसन्धानको लागि क्षेत्र कम गर्न सक्छ।
911 XNUMX ११ प्रेषकले सोध्नेछ कि तपाईंले कति शटहरू सुन्नुभयो। तपाईंको सम्झनामा सबै भन्दा राम्रो गर्नका लागि कति कति शटहरू तपाईंले सुन्नुभयो भनेर बताउनुहोस्। संकेत गर्नुहोस् यदि तिनीहरू छिटो चलाईएको थियो वा होईन - यदि तपाईं बान्की याद गर्न सक्नुहुन्छ (पप-पप ... पप-पप-पप-पप), प्रेषकलाई भन्नुहोस्। यदि शटहरू फरक फरक लाग्दछ भने, यद्यपि ती दुई वा बढि बन्दुकबाट आएका हुन, रिपोर्ट पनि गर्नुहोस्।
रिपोर्टिंग सुझावहरू वा चलिरहेको गतिविधि
मुद्दाहरु वा जानकारी रिपोर्ट गर्न एसएलएमपीडीसँग सम्पर्कको दुई अतिरिक्त पोइन्टहरू छन् जुन calling १११ वा गैर आपतकालीन लाइन कल गर्ने तहसम्म नहुन सक्छ।
एक अपराध भएको छ कि एक टिप वा अतिरिक्त जानकारी प्रदान गर्न, कल गर्नुहोस् सेन्ट लुइस क्षेत्रीय क्राइमस्टोपर्स at (866) 371 XNUMX१-टिप्स (8477 XNUMX) तपाईं पनि गर्न सक्नुहुन्छ क्राइमस्टोपर्स वेबसाइट मार्फत सुझाव सबमिट गर्नुहोस्। केहि केसहरूमा जब टिपले भयानक गिरफ्तारी निम्त्याउँदछ, पुरस्कार दिन सकिन्छ।
तपाईं कल ड्रम द्वारा एसएलएमपीडीको गोप्य साक्षी हॉटलाइनलाई जारी ड्रग वा गिरोह गतिविधि रिपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ (314१241) २XNUMX१-COPS (२2677)। स्थान, संदिग्ध नाम वा वर्णन, र गतिविधिहरूको प्रकार सहित स्थितिको विस्तृत विवरण छोड्नुहोस्।
थप रूपमा, तपाईंको छिमेकी सुधार विशेषज्ञ एक विशिष्ट स्थान वा सम्पत्तीसँग सम्बन्धित चलिरहेको उपद्रव गतिविधिमा हस्तक्षेप गर्न प्रशिक्षण दिइन्छ। को NIS समस्या प्रॉपर्टी एकाई र अन्य पुलिससँग दुबै फौजदारी न्याय प्रणाली भित्र र बाहेक विकल्पहरूको खोजी गर्न काम गर्दछ।
एकिन छैन? 911 ११ लाई कल गर्नुहोस्
यदि तपाईं निश्चित हुनुहुन्न कि परिस्थितिले 911 कल पुर्‍याउँछ वा गर्दैन भने, 911 १११ छनौट गर्नुहोस्। जब शंका हो, 911 मा कल गर्नुहोस्।
डचटाउनमा पुलिस जिल्लाहरू
अधिक डचटाउन क्षेत्र दुई फरक फरक भित्र पर्दछ SLMPD पुलिस जिल्लाहरू, पहिलो जिल्ला र तेस्रो जिल्ला।
SLMPD पहिलो जिल्ला
यो SLMPD को पहिलो जिल्ला डचटाउनको दक्षिणी र पश्चिमी भागहरू र माउन्ट प्लीजन्टको सम्पूर्णतालाई समेट्छ। पहिलो जिल्लाको सीमाना शहरको सीमादेखि दक्षिणमा मेरैमेक स्ट्रिट, दक्षिण ग्रान्ड बोउलेभर्ड र उत्तरमा चिप्पेवा स्ट्रिटसम्म फैलिएको छ।
सेन्ट लुइस मेट्रोपोलिटन पुलिस विभागको पहिलो जिल्ला।
पहिलो जिल्ला दक्षिण र पश्चिम तर्फ फैलिएर होली हिल्स, बोउलेभर्ड हाइट्स, प्रिन्स्टन हाइट्स, र साउथेम्प्टन जस्ता अन्य वरपरहरू समावेश गर्न।
पहिलो जिल्ला सम्पर्क गर्दै
पहिलो जिल्ला एसएलएमपीडीको दक्षिण पेट्रोल डिभिजनको एक हिस्सा हो जुन दक्षिण पश्चिम बगैंचा छिमेकमा आधारित छ। मा दक्षिण पेट्रोल स्टेशन सम्पर्क गर्नुहोस् (314) 444-0100.
पहिलो जिल्लामा डचटाउनको नेबरहुड संपर्क अधिकारी ओएफसी हो। स्टीभ बुर्ले। तपाईं उसलाई ईमेल गर्न सक्नुहुन्छ smburle@slmpd.org.
क्याप्टेन डोनेल मूर पहिलो जिल्ला को कमाण्डर हो। तपाईं उसलाई दक्षिण पेट्रोल स्टेशन कल गरेर वा ईमेल गरेर सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ dmoore@slmpd.org.
मेजर मे। र्यान चचेरे भाईहरु दक्षिण पेट्रोल डिभिजन को कमाण्डर हो। तपाईं उसलाई कल गरेर दक्षिण पेट्रोलमा पुग्न सक्नुहुन्छ (314) 444-0100 वा ईमेल गर्दै rocousins@slmpd.org.
SLMPD तेस्रो जिल्ला
यो SLMPD को तेस्रो जिल्ला डचटाउनको उत्तरी भाग उचित कवर गर्दछ, साथ साथै ग्रेभियोस पार्क र समुद्री भिल्ला। तेस्रो जिल्लाले मेरैमेक स्ट्रिटको उत्तरी र ग्रान्डको पूर्वमा सबै समावेश गर्दछ।
सेन्ट लुइस मेट्रोपोलिटन पुलिस विभागको तेस्रो जिल्ला।
तेर्सो डिस्ट्रिक्टले उत्तरमा चौटाउ एभिन्यूको उत्तरमा पर्ने सम्पूर्ण शहर तन्काएको छ, र लाफेयेट स्क्वायर, सौरार्ड, र बेन्टन पार्क सहित अन्य छिमेकहरू समेट्छ।
तेस्रो जिल्ला सम्पर्क गर्दै
तेस्रो जिल्ला सेन्ट्रल पेट्रोल डिभिजनको एक हिस्सा हो, जेफभ्यान्डरलो छिमेकीको डाउनटाउनको उत्तरमा मात्र आधारित। केन्द्रीय पेट्रोलमा मुख्य टेलिफोन नम्बर हो (314) 444-2500.
Ofc ज्यामोन ग्यारेट डचटाउनको तेस्रो जिल्ला भागको लागि नेबरहुड सम्पर्क अधिकारी हो। तपाईं उसलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ (314) 444-2595 or jdgarrett@slmpd.org.
क्याप्टेन जो मोरिसी तेस्रो जिल्लाको कमाण्डर हो। सेन्ट्रल पेट्रोल वा मा कल गरेर उहाँलाई सम्पर्क गर्नुहोस् (314) 444-2597। तपाईं उसलाई ईमेल पनि गर्न सक्नुहुनेछ jamorici@slmpd.org.
मेजर मे। रेनी Kriesmann केन्द्रीय पेट्रोल डिभिजन को कमांडर हो। तपाईं उनलाई पुग्न केन्द्रीय पेट्रोलमा पुग्न सक्नुहुन्छ (314) 444-2500.
अन्य गैर आपातकालीन सेवाहरू सम्पर्क गर्दै
केहि परिस्थितिहरूले जहिले पनि पुलिस प्रतिक्रियाको लागि कल गर्दैनन्। फेरि, जब शंका हो, 911 १११ वा गैर आपतकालीन लाइन कल गर्नुहोस्। तर यो कुरा मनमा राख्नुहोस् कि पुलिस सामाजिक कार्यकर्ताहरू, चिकित्सा विशेषज्ञहरू वा सल्लाहकारहरू होइनन्।
डचटाउन STL.org कम्पाइल गरेको छ वैकल्पिक स्रोतहरूको सूची मानसिक स्वास्थ्य सरोकार, घरबारविहीनता, चलिरहेको घरेलु हिंसा, पदार्थ दुर्व्यवहार, र अधिक जस्ता संवेदनशील मुद्दाहरूको सामना गर्न। विशेष समस्याहरूको साथ काम गर्न प्रशिक्षित विज्ञहरूले प्राय: बढी प्रभावकारी र कम दंडात्मक उत्तरहरू प्रदान गर्न सक्दछन्। फेरि, यदि तत्काल खतरा छ भने, 911 मा कल गर्नुहोस्, तर दीर्घकालीन समाधानहरूको लागि, अन्य सेवा प्रदायकहरू समक्ष पुग्न विचार गर्नुहोस्।
मुद्दाहरूको विस्तृत श्रृंखलाका लागि जुन समस्या खडा गर्छ तर तत्काल खतरा प्रस्तुत गर्दैन, यो नागरिकको सेवा ब्यूरो वा तपाईंको छिमेकी सुधार विशेषज्ञ निर्देशन र सहायता प्रदान गर्न सक्छ। सँग एक रिपोर्ट फाइल गर्नुहोस् CSB वा तपाईंको कल गर्नुहोस् NIS कोड उल्ल ,्घन, खाली भवनहरूको समस्या, मर्मत सम्बन्धी समस्याहरू, र अधिक सहित चलिरहेको उपद्रवी गतिविधिको लागि। CSB वा तपाईंको NIS ले काम गर्दछ वा SLMPD लाई आवश्यकको रूपमा सन्दर्भ गर्दछ।
यस लेखका लागि फोटोग्राफर फोटोग्राफरको सौजन्यसाथ आउँदछन् पल सेबलम्यान.
डचटाउन STL.org डचटाउन छिमेकी संसाधनहरू डचटाउनमा पुलिस: को, कहाँ र कहिले फोन गर्ने